Large kuvhura reservoir dundira Vagadziri & Suppliers - China Large kuvhura reservoir dundira Factory
Kunze Yakakura Kuvhura Hydration Bladder
Multifunctional collapsible diki bhegi risina mvura, rinogona kushandiswa kumisasa yekunze kunotora mvura;inogona zvakare kunge iri bhegi diki rekuchengetera, unogona kuisa mamwe maodd uye magumo, ita kuti nzvimbo yekugara ive yakarongeka uye yakachena.Kumwe kushandiswa kwakamirira kuti iwe uongorore.
Hombe Inovhura Outdoor Water Bag
Iyo yekunze bhegi remvura yemitambo ine kuvhurika kukuru iri nyore kuchenesa nekuzadza.Izvo zvemhando yepamusoro zvehushamwari zvezvakatipoteredza zvinogona kumira tembiricha kubva paminus 20 madhigirii kusvika kune yakanaka 50 madhigirii, uye anogona kuchinjika kune akasiyana akanyanyisa ekunze nharaunda.Zadza zviwanikwa zvemvura kwauri panguva dzakaoma.Iva mubatsiri wako wepanze.
Kunze Kutasva Milky White Transparent Hydration Bladder
Chigadzirwa chinogona kutorwa semubatsiri wekunze wekunze, kurovedza muviri kunowanzo kuperekedzwa nekurasikirwa kwemvura yemuviri, uye inonyanya kukosha kuzadza zviwanikwa zvemvura.Bhegi remvura rine hushamwari uye riri nyore rinogona kuchengetedza muviri wako uri mumhando yepamusoro.
Bhegi remvura rakagadzirirwa kushandiswa kunze, riri nyore kutakura, nyore kushandisa, uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza kunoita kuti rive rakasiyana.High quality, kupfeka kuramba uye kwete nyore kukuvadza unhu hwayo.Zvinokutendera kuti uwane kunaka kweruzivo.
Mafashoni emitambo yemvura bhegi ine kuvhura kukuru.Kuvhura kwakafara kunofambisa kuzadza nekuchenesa, uye dhizaini yelace izere nefashoni.Inokodzera akasiyana emitambo yekunze, sekukwira makomo, kuchovha bhasikoro, kuyambuka-nyika, kukwira makomo, nezvimwe.
1L/1.5L/2L/2.5L/3L Hydration Yemvura Dundira Nechubhu
Yakasarudzika bhegi remvura rakagadzirwa rine dhizaini yekudhonza-kunze pakuvhura kuti uwedzere kuvhurwa kwebhegi remvura kuitira kuchenesa uye kuzadza zviri nyore.Uye hapana chikonzero chekunetseka pamusoro pekudonha kwemvura, uye inogona kushandiswa zvakachengeteka uye zvakachengeteka.
Yepamusoro-yemhando yekunze bhegi remvura ine hombe yekuvhura dhizaini yekuzadza uye kuchenesa zviri nyore.Zvinhu zvemhando yepamusoro, hazvisi nyore kupfeka, zviri nyore kuchenesa.Kudzivirirwa kwezvakatipoteredza, kusiri-chepfu, hakuna kunhuhwirira kwakasarudzika, hapana BPA.Inogona kushandiswa nechivimbo.Wedzera kupenya kurwendo rwako rwemitambo.
Outdoor Sports Army Green Hombe Kuvhura Chikafu Giredhi Mvura Bag
Bhegi remvura rine dhizaini yakakura yekuvhura iri nyore kune jekiseni remvura, kuchenesa uye kudzivirira mvura.Panguva imwecheteyo, ine chitarisiko chemauto egirinhi uye mhando yeindasitiri yemauto.Yepamusoro-soro, isingapfeki, inosvina-inodzivirira, yakasimba uye isingakuvare nyore.Zvekudya zvegiredhi rekudya zvakapfuura akati wandei epasi rose ekudzivirira kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
Kukwira Hiking Kumhanya hydration reservoirs Dema
Mafashoni emvura bhegi ane akasiyana bhuruu uye dema mavara.Muviri mutema unoshingirira kutsvina, saka haufanirwe kunetseka nezvekusviba kunyangwe uri kunze, unogona kucheneswa nekupukuta kamwe chete.Iyo yakawedzera jekiseni yemvura chiteshi iri nyore kushandisa, uye inobvisa inobvisa pombi iri nyore kuchenesa.Zviri nyore kushandisa uye nyore kutakura.
Yepamusoro-yemhando yepamusoro BPA-yekunze yemitambo bhegi remvura, inotakurika uye ine hushamwari, iyi ndiyo shamwari yako yepamoyo yekusimba, kukwira makomo, kuchovha bhasikoro, uye kudzika musasa.